कहाँ छ अयोध्या ? – erupse.com
प्रभाष के दत्त
“यथार्थ अयोध्या बिरगञ्जको पश्चिमतिर ठोरीमा पर्छ, भारतले सांस्कृतिक अतिक्रमण गरी आफ्नो भूमिमा भगवान श्रीरामको जन्म भएको दाबी गर्दै आएको छ ।”–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार परम्परागत् विश्वासलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालकी सीताको विवाह ठोरीमा पर्ने अयोध्याका राजकुमार श्रीरामसँग भएको आशयसहितको अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो ।
भारतमा पछिल्लो महिना सीमा विवादको प्रसङ्गमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल र भारतबीचको ‘रोटी बेटी’को सम्बन्ध रहेको प्रतिक्रिया दिएको खण्डन स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिब्यक्ति आएको अथ्र्याइएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिब्यक्तिले ‘वास्तविक’ अयोध्याको अवस्थितिलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
अयोध्या त्रेतायुगीन श्रीरामको जन्मस्थल हो । प्राचीन ग्रन्थहरुमा श्रीरामको राज्य अयोध्या रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीरामको जन्मभूमि सम्बन्धमा उठाउनुभएको दाबी भने पहिलो होइन । श्रीरामको जन्मस्थलको बारेमा दाबी गरिएको स्थलको सूचीमा थप एक स्थान थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी बमोजिम (नेपालको प्रदेश २) को पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका श्रीरामको जन्मस्थल हो । सीमासँग जोडिएको ठोरीकै भारतीय भूभागलाई भिखना ठोरी भनिन्छ । जुन भारतीय रेल सञ्जालले जोडिएको छ । उक्त बजारसम्म नेपालका ठोरीबासी किनमेलका लागि पुग्ने गरेका छन् ।
बाल्मीकिले रामायणमा उल्लेख गरेको मौखिक दस्तावेजहरुको आधारमा तयार गरिए बमोजिम अयोध्या आधुनिक उत्तर प्रदेशमा पर्छ । करिब तीन हजार वर्षदेखि रामायण परम्पराले पहिचान गरेको अयोध्या उत्तर प्रदेशमा पर्छ । जुन साहित्यिक प्रमाणमा आधारित छन् । तर पुरातात्विक प्रमाण नहुँदा उत्तर प्रदेशको अयोध्या समेत रामको जन्म भूमि नै हो भन्नेमा वर्षौंदेखि विवाद छ । तर मंगोलिया, थाइल्याण्ड र इन्डोनेसियाली लोककथाले उत्तर प्रदेशको अयोध्या नै रामको जन्म भूमि हो भन्ने तर्कलाई समर्थन गर्छ ।
लोककथाको अयोध्या कहाँ छ ?
सन् १९९० मा भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले चलाएको आन्दोलनदेखि नै अयोध्याको अहिलेको पहिचानलाई चुनौती दिदै आएको छ । चन्द्रशेखर भारतका प्रधानमन्त्री हुँदा अयोध्याको राम जन्मभूमि विवाद समाधान गर्ने प्रयासको सुरुवात गर्नुभएको थियो । अहिले भारतकै सर्वोच्च अदालतले हिन्दू र मुसलमान दुबै पक्ष कहाँ भएको प्रमाणको आधारमा जन्मभूमीको विवाद समाधान गरिसकेको छ ।
र यसै समयमा बाबरी मस्जिद कार्यसमितिको प्रतिनिधित्व गर्नुभएका इतिहासविद्हरु आर एस शर्मा, डीएन झा, एम ए अली र सूरज भानले अहिलेको अयोध्या श्रीरामको जन्मभूमि नरहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । जसले प्रमुख विवाद निम्ताएको थियो ।
ऐतिहासिक अनुमानको अयोध्या
दुईवर्षपछि सन् १९९२ मा अर्का इतिहासविद् श्याम नारायण पाण्डे अर्को ‘एन्सिएन्ट जियोग्राफी अफ अयोध्या’ किताब लिएर आउनुभयो । उहाँले अफगानिस्तानको हेरातलाई श्रीराम जन्म लिएको अयोध्याको रुपमा दाबी गर्नुभएको छ ।
पाँच वर्षपछि सन् १९९७ पाण्डेले आफ्नो शोध एक पत्रिकामा प्रकाशन गराउनुभयो । ‘हिस्टोरिकल राम डिस्टिग्विश्ड फ्रम गड राम’ बेंगलौरमा भारतीय कँग्रेसको ऐतिहासिक ५८ औं सत्रमा लिएर आउनुभयो ।
सन् १९९८ मा पुरातत्वविद् एमभीएन कृष्ण राउले भारतकै हरियाणा राज्यको बनवालीलाई भगवान रामको जन्म स्थलको रुपमा दाबी गर्नुभयो । उहाँले सिन्धु घाटीको परिधिलाई आधार मानेर उहाँले आफ्नो शोधलाई पूर्णता दिनुभएको छ । राउले पहिचान गरेको रामायणको अयोध्या भने हरियाणा राज्यको प्राचीन सरस्वती नदीको किनारमा पर्छ ।
उहाँका अनुसार श्रीरामको साम्राज्य सिन्धु घाटीदेखि हालको इराकसम्म फैलिएको छ । जसमा अफगानिस्तान र इरान पनि पर्छ । उहाँको शोध अनुसार वर्तमान इराकको बैबिलोनका तात्कालीन राजा हम्मुराबी रामायणकालीन रावण हुनुहुन्थ्यो ।
सन् २००० मा राजेश कोच्चरले लेख्नुभएको अर्को किताब ‘द् वेदिक पिपुलःदेयर हिस्टोरी एण्ड जियोग्राफी’का अनुसार श्रीरामको जन्म अयोध्यामा भएको होइन । अयोध्यामा रामको जन्म भएको भन्दै गरिने शोध व्यर्थ हुने उहाँको दाबी छ । कोच्चर भौतिक विज्ञानका अध्येता रहेपनि संस्कुति र इतिहासमा विशेष रुची राख्नुहुन्छ ।
कोच्चरले अफगानिस्तानमा रहेको हरि–रड वा हारोयूलाई सरयू नदीको रुपमा पहिचान गर्नुभएको छ । उहाँले उक्त किताबमा श्रीरामको पुस्ता अफगानिस्तान र पूर्बी इरान क्षेत्रमा बसोबास गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
पाकिस्तान र थाइल्याण्डमा पनि अयोध्या
सन् २०१५ मा अब्दुल रहिम कुरैशीले एक शोध प्रकाशित गर्नुभयो । ‘फैक्ट्स अफ अयोध्या एपिसोड’का अनुसार श्रीरामको जन्म हालको पाकिस्तानको रेहमान ढेरीमा भएको छ । उहाँ अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल लअ बोर्डका सदस्य हुनुहुन्छ ।
र अयोध्याका अर्का स्पर्धी पनि छन् । जुन थाइल्याण्डमा छ । जुन श्रीरामको जन्मपछि नाम दिइएको हो । मध्ययुगीन शहर हाल ‘अयुथाया’ ऐतिहासिक पार्कमा बस्छन् । जुन प्राचीन सीयम राज्य थाइल्याण्डको राजधानी थियो । १४ औं शताब्दीमा राजा ऊ थोङ्ग त्यहाँ सर्नुभएको विश्वास गरिन्छ । राज्यमा ठेउलाको प्रकोप बढेपछि उहाँ अयुथाया सर्नुभएको थियो । अयुथाया चाओ फ्राया नदीको किनारमा अवस्थित छन् ।
तर दाबी गरिएका यी कुनै पनि अयोध्याको रामायण र अन्य प्राचीन किताबमा उल्लेख भए बमोजिम श्रीरामको जन्मभूममिसँग सम्बन्ध रहेको पर्याप्त प्रमाण छैन् ।
अर्को तर्क बमोजिम ११ औं शताब्दीमा मात्रै सरयू नदी किनारको शहर अयोध्याको नामाकरण गरिएको हो । त्यसअघि सरयू नदी किनारको उक्त शहरको नाम साकेत थियो ।
(इन्डिया टुडेका लागि प्रभाष के दत्तको रिपोर्टको गाेरखापत्र अनलाइनका लागि इश्वरचन्द्र झाले गनुर् भएकाे अनुवादकाे अंश )
महालक्ष्मी लाइफले पनि आईपीओ निष्काशन गर्ने, कहिले र कतिको आउँदै ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको तर्फबाट आगामी चुनावका लागि घोषणापत्र लेख्ने कार्य शुरु गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।..
नेकपाका अध्यक्ष ओलीद्वारा चुनावी घोषणापत्र लेख्ने तयारी, देशभरीका कार्यकर्तालाई सुझाव दिन परिपत्र January 24, 2021
महालक्ष्मी लाइफले पनि आईपीओ निष्काशन गर्ने, कहिले र कतिको आउँदै ? January 24, 2021